Mizana manda 10 tsara indrindra: Ny fividiananao mora mividy (2019) - Fahasalamana | Desambra 2021
Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fiaraha-Monina, Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Orinasa Wellness Orinasa, The Checkout Fiaraha-Monina Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy News Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Community, Company Ny Fizahana Orinasa, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fialam-Boly
Tena >> Fahasalamana >> Mizana manda 10 tsara indrindra: Ny fividiananao mora mividy (2019)
Mizana manda 10 tsara indrindra: Ny fividiananao mora mividy (2019)
Maro amin'ireo mizana matavy amin'ny vatana ankehitriny no mandrefy mihoatra lavitra noho ny lanjan'ny vatanao. Raha tokony ho hitanao fotsiny ny lanjanao rehefa miakatra amin'ny ambaratonga ianao, ny refin'ny tavy amin'ny vatana dia mampiseho matetika ny tondro fitambaran'ny vatanao, ny taolana sy ny hozatra, ny lanjan'ny vatana ary maro hafa. Ny fametrahana ny mizana dia tsotra, satria ny ankamaroany dia mila smartphone fotsiny. Angamba ny hevitrao momba ny refin'ny tavy amin'ny vatana tsara indrindra dia iray izay manome firafitry ny vatana feno, na izay manome anao ny fototra nefa mijanona mora. Ireto ny safidintsika ambony.
Inona avy ireo mizana matavy indrindra amin'ny taona 2019?
RENPHO Bluetooth Body Fat Scale Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Mitahiry data ho an'ny mpampiasa maro
Fatra fandrefesana ara-pahasalamana mihoatra ny 10
Vidiny: $ 27,99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Scala Fat Fat Digital EatSmart Getfit Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Mitahiry tahiry ho azy
Famakiana eo no ho eo
Vidiny: 24,93 $ Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Yunmai Premium Smart Scale Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Mandeha hatrany amin'ny mpampiasa 16
Vidiny: $ 69.95 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Fitbit Aria 2 WiFi Smart Scale Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Mandrindra ho azy
Misy drafitra sakafo namboarina
Miorina mora amin'ny alàlan'ny Bluetooth
Vidiny: 456,00 $ Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Weight Gurus Smart Body Fat Scale Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Tsy mila telefaona handanjalanja
Serivisy ho an'ny mpanjifa manokana
Vidiny: 49,88 $ Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Omron Body Composition Monitor Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Mitahiry fahatsiarovana hatramin'ny 90 andro
Fanakatonana on / off
Vidiny: $ 76.52 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Skala Smart Garmin Index Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Asehoy ny alina
Mametraka amin'ny smartphone
Mandrefy refy isan-karazany
Vidiny: $ 134.85 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
QardioBase 2 Wireless Smart Scale Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Hitan'ny mpampiasa mandeha ho azy
Fampisehoana LED lehibe
Maody maodely fanehoan-kevitra
Vidiny: 127,49 $ Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Nokia Body + Composition Scale Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Fanaraha-maso ny sakafo mahavelona
iOS sy Android mifanentana
Vidiny: 79,99 $ Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Sarin-tavy Bluetooth iray an'ny olona iray Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Sensors mariazy marobe
Vidiny: $ 49,99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Vidiny: $ 27,99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Mandeha metrika maromaro
Fampisehoana LED backlit
Maniry ny sasany ho tsara kokoa ilay fampiharana miaraka aminy
Misy vitsivitsy manonona fiovana kely amin'ny famakiana lanjany
Misy loko iray ihany
Tsy mila mandany vola be ianao hahazoana ambaratonga tavy amin'ny vatana izay misy fiasa marobe ary manome valiny marina. Ny RENPHO Bluetooth Body Fat Scale dia mamela anao hanara-maso ny tavy amin'ny vatana, ny taolana, ny BMI, ny hozatra, ny lanjan'ny vatana tsy misy tavy, ny taonan'ny vatana ary bebe kokoa, ary mampiseho ny fampahalalana amin'ny fampisehoana LED backlit. Mety ihany koa ho an'ny fianakaviana, satria afaka mitahiry angona sy fampahalalana ho an'ny mpampiasa tsy voafetra ianao. Miasa ny mizana na dia tsy mifandray mivantana amin'ny alàlan'ny Bluetooth aza izany, ary handefa data amin'ny findainao raha vantany vao mifandray indray.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny RENPHO Bluetooth Body Fat Scale eto.
VideoLahatsary mifandraika amin'ny ambaratonga tavy blu renpho blueberry2018-10-22T12: 54: 18-04: 00
2. Scala Fat Fat Digital EatSmart Getfit
Vidiny: 24,93 $ Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Manisa ny isan-jaton'ny tavy sy rano miaraka amin'ny taolana sy ny hozatra
Mitahiry kaonty hatramin'ny valo ny mpampiasa
Fampisehoana LCD lehibe 3,5-inch
Tsy misy fifandraisana WiFi
Tsy mampiditra fampiharana mifanentana
Tsy afaka mitahiry refy isan'andro
Ny asa fandrefesana dia misy ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana sy rano miaraka amin'ny isan-jaton'ny taolana sy ny hozatra. Ny teknolojia famantaran-tena momba ny fiara dia mitahiry ireo mombamomba anao manokana sy angon-drakitra hatramin'ny valo mpampiasa isan-karazany ary afaka mamantatra ny tsirairay avy rehefa manakatra ny refy izy. Mankanesa eo amin'ilay ambaratonga amin'ny tongotra mitanjaka avy eo dia omeo ny lahy sy ny vavy, ny taonanao, ny haavonao, ny lanjanao ary ny haavon'ny hetsikao. Avy eo ny refy dia hanome refy marina. Miorina hatramin'ny 400 pounds ity refy ity ary manana fisehoana LCD lehibe misy habeny 3,5 miaraka amina backlight fotsy ho mora vakina. Voaforona ho azy ihany koa izy io ary tsy mila mikitika mandeha amin'ny herinaratra. Ny fisongadinana hafa dia misy ny famonoana herinaratra sy bateria AAA miisa efatra.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa amin'ny EatSmart Getfit Digital Body Fat Scale eto.
VideoVideo mifandraika amin'ny eatsmart getfit ambaratonga tavy dizitaly2018-10-22T12: 57: 58-04: 00
3. Yunmai Premium Smart Scale
Vidiny: $ 69.95 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Anisan'izany ny fampiharana mihena
Mandany segondra vitsy monja vao hatsangana
Tsy azo ampiarahina amin'ny fampiharana ara-pahasalamana malaza hafa ny fampiharana
Tsy arahana amin'ny fampiharana ny tantara
Ny sasany mimenomenona ny amin'ny fandrefesana lanjany tsy mitovy
Ity refin'ny tavy amin'ny vatana ity dia mpanara-maso ihany koa ny vatana, midika izany fa manome mihoatra ny ankamaroan'ny mpifaninana izy. Ny mizana dia manaraka ny tavy amin'ny vatana, ny lanjany, ny BMI, ny taolana, ny hozatra, ny haavon'ny hydration, ny taonanao ary maro hafa hanome anao topy maso feno momba ny haavon'ny fahasalamana sy ny fahasalamana. Ampidirina ny fampiharana fatiantoka lanja ary mitaky anao fotsiny ny fampifanarahana ny mombamomba anao hanombohana. Ny fisongadinana iray hafa dia ny fitantanana ny fitiliana lanja ho an'ny olona 16. Tsy mila manana finday mora raisina koa ianao handanja ny tenanao. Ity mizana ity dia miaraka amin'ny haitao matanjaka sy fisehoana LCD mora hita. Izy io koa dia manana fifandraisana Bluetooth 4.0 tsy misy tariby. Ny refy dia mety mahatratra hatramin'ny 396,8 pounds.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny Yunmai Premium Smart Scale eto.
VideoLahatsary mifandraika amin'ny ambaratonga voalohany premium yunmai2018-10-22T13: 01: 08-04: 00
4. Fitbit Aria 2 WiFi Smart Scale
Vidiny: 456,00 $ Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Tonga amin'ny loko roa
Manohana hatramin'ny valo ny mpampiasa
Ny olan'ny fifandraisana dia fitarainana mahazatra
Ny sasany mahita ny malama malama amin'ny ba kiraro
Ny Fitbit Aria 2 WiFi Smart Scale dia haingana sy mahomby amin'ny syncs ny data momba ny fahasalamanao amin'ny alàlan'ny Bluetooth namboarina. Ny valiny dia ny BMI, ny lanjanao, ny tavy amin'ny vatanao ary ny lanjanao dia nalefa tany amin'ny dashboard Fitbit mba hahazoana tombony fanampiny. Aria 2 dia afaka mahafantatra mpampiasa hatramin'ny valo samihafa ihany koa. Ny fananganana dia mitaky minitra vitsy monja amin'ny fampiasana ny torolàlana fanombohana haingana sy ny fifandraisana Bluetooth findainao. Io refy io dia tonga amin'ny loko mainty sy fotsy, ary misy tampon-vera voaravaka voaravaka. Ny fetra mavesatra ho an'ity mizana ity dia 400 pounds.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny Fitbit Aria 2 WiFi Smart Scale eto.
VideoVideo related to fitbit aria 2 wifi smart scale2018-10-22T13: 03: 50-04: 00
5. Scala momba ny tavy matavy
Vidiny: 49,88 $ Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Mifanaraka amin'ireo fampiharana malaza toy ny Fitbit sy Apple Health
Vokatry ny fivarotana amin'ny fampiharana miaraka aminy
Mahita hatrany ho valo ny mpampiasa
Afaka miady hanavaka ny mpampiasa manana lanjany mitovy amin'izany
Misy milaza vitsivitsy ny olana mifandraika matetika, indrindra rehefa amin'ny fampiasana vitsivitsy voalohany
Tsy atolotra ho an'ireo bevohoka na misy mpampandry aretina
Weight Gurus dia namolavola ny Smart Smart Body Fat Scale mba hanomezana fandrefesana marina miaraka amin'ny fanamorana ny teknolojia Bluetooth. Miaraka amin'ny tavy amin'ny vatana sy ny BMI, ny mizana dia manara-maso ny haben'ny taolana, ny hozatra ary ny lanja amin'ny rano. Ny valiny dia alefa amin'ny fampiharana Weight Gurus, izay mifanaraka amin'ny app Fitbit, Google Fit ary Apple Health. Ny efijery lehibe backlit dia manamora ny fahitana ny valiny. Ny endri-javatra hafa dia ahitana ny detection auto ho an'ny mpampiasa valo, ny tongotra tsy miposaka ary ny tampon'ny vera mora tezitra.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny lanjan'ny Fat Gurus momba ny vatana sy ny hevitra eto.
6. Monitor ny fitambarana vatana Omron
Vidiny: $ 76.52 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Fahatsapana ny vatana feno
Fitaovana tanana misy tadiny azo esorina
Mitahiry piraofilina ho an'ny mpampiasa efatra
Mahafinaritra ny toerana sy ny mitongilana
Tsy mitahiry statistikan'ny mpampiasa
Ny sasany mitaraina amin'ny famakiana tsy mifanaraka
Ny fahatsapana vatana iray manontolo dia manome antoka ny valiny marina kokoa amin'ny alàlan'ny fandrefesana amin'ny alàlan'ny kajikajin'ny tanana hatramin'ny tongotra, izay afaka mampihena ny fitarihan'ny rano amin'ny valiny. Ankoatry ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana, io refin'ny tavy amin'ny vatana io dia mamaritra ny BMI, tavy visceral, lanja, hozatra ny taolam-pohy ary maro hafa, ho fitambarana fitambarana fitambarana fito. Ny famantarana elektrika dia alefa manerana ny vatana, manomboka amin'ny sandrinao ka hatramin'ny tongotrao, mba hikajiana ny rano amin'ny vatanao manontolo. Ny sensor ho an'ny tanana dia ampidirina ihany koa ho an'ny valiny marina kokoa ary misy tadiny azo esorina ho an'ireo mpampiasa lava kokoa. Azonao atao ny manomana mialoha ny mombamomba ny mpampiasa misaraka efatra. Ity mizana ity dia manana fisehoana LCD lehibe sy lanjan'ny 330 pounds.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny Omron Body Composition Monitor eto.
VideoLahatsary mifandraika amin'ny fanaraha-maso ny vatan'ny omron2018-10-22T13: 14: 03-04: 00
7. Garmin Index mahay mizana
Vidiny: $ 134.85 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Manolotra metatra mandroso maromaro
Manohana hatramin'ny 16 mpampiasa
Ny sasany mahita azy somary lehibe / clunky
Tsy manana fidirana amin'ny antoko fahatelo amin'izao fotoana izao
Misy vitsivitsy mitaraina amin'ny olan'ny WiFi / fifandraisana, indrindra mandritra ny fametrahana
Ny Garmin Index Scale Smart dia mizana mifandraika amin'ny WiFi izay mandrefy ny BMI, ny lanja, ny hozatry ny taolana, ny tavy amin'ny vatana ary ny isan-jaton'ny rano. Mahafantatra mpampiasa hatramin'ny 16 koa izy io, izay avo roa heny amin'ny haben'ny matavy mifaninana indrindra. Ny mombamomba anao dia ampifandraisina amin'ny Garmin Connect, izay ahafahanao manara-maso ihany koa ny angona avy amin'ny fitafiana Garmin hafa mety anananao.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny Garmin Index Scale sy hevitra eto.
VideoLahatsary mifandraika amin'ny garmin index smart scale2018-10-22T14: 55: 56-04: 00
8. QardioBase 2 Wireless Smart Scale
Vidiny: 127,49 $ Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Bateria azo averina miverina miaraka amin'ny tariby micro USB misy
Azo antoka ho an'ny vehivavy bevohoka sy ireo manana pacemaker
Manolotra fanombanana ara-batana
Mila Bluetooth 4.0
Tsy afaka misintona valiny amin'ny fampiharana miaraka aminy
Tanana vitsivitsy no sarotra ny manangana azy
Mifanohitra amin'ny ankamaroan'ny mizana amin'ny vatana eny an-tsena, izay mampiasa batterie AA na AAA, ny QardioBase 2 Wireless Smart Scale dia misy bateria azo averina azo maharitra herintaona na dia ampiasaina matetika aza. Misy tariby micro USB ampidirina ao amin'ny recharging. Rehefa manitsaka ny refy ianao dia ho hitanao ny lanjanao, ny isan-jaton'ny tavy, ny hozatra ary ny taolana sy ny rano. Ity ambaratonga ity koa dia azo antoka ho an'ny vehivavy bevohoka, ary na dia manana fomba fitondrana vohoka aza izy hanarahana ny fandrosoana isan-kerinandro. Ho tambin-karama fanampiny, ireo mpampiasa manana mpanamboatra hafainganam-pandeha dia afaka mampiasa soa aman-tsara ny refy amin'ny maody lanja ihany. Ny endri-javatra hafa dia misy trano fonenana feno fahamaotinana, seho LED ary ny fahafantarana ireo mpampiasa marobe. Ny maody fanehoan-kevitra hendry miavaka dia mampiseho fampahalalana dia smiley fa tsy isa.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny QardioBase 2 Wireless Scale ary hevitra eto.
VideoLahatsary mifandraika amin'ny refy Smart Wireless qardiobase 22018-10-22T15: 00: 35-04: 00
9. Nokia Body + Composition Scale
Vidiny: 79,99 $ Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Manoratra tahiry ho azy ho an'ny mpampiasa valo
Manolotra coaching manokana
Mora kokoa noho ny mpifaninana maro
Ireo manana pacemaker dia mila manala ny vakiteny rehetra ankoatry ny lanjany
Ny sasany maniry ny handrosoana kokoa ny fampiharana fahasalamana Nokia
Tsy misy fampisehoana loko
Ity ambaratonga fitambaran'ny tavy amin'ny vatana ity dia noforonina araka ny marina sy marina ao an-tsaina ary manome ny lanjanao, ny isan-jaton'ny rano ary ny tavy, hozatra ary taolana. Ny fampiharana miaraka dia miasa ho mpanazatra manokana ihany koa, ary hanome valisoa anao rehefa tonga amin'ny tanjona kendrenao manokana ianao. Voarakitra ho azy ny angona rehetra. Ity ambaratonga ity dia nahatratra hatramin'ny valo ny mpampiasa indray mandeha. Ny lafin-javatra hafa dia misy ny fanarahan-dia ny sakafo sy ny toetr'andro isan'andro eo an-toerana.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny Nokia Body + Body Composition WiFi Scale eto sy hevitra eto.
VideoLahatsary mifandraika amin'ny nokia body + scale scale2018-10-22T15: 09: 47-04: 00
10. Sehatra fatin'ny Bluetooth 1n'ny iray
Vidiny: $ 49,99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Android sy iOS mifanentana
Ambonin'ny vera maharitra matevina
Tsy atolotra ho an'ny vehivavy bevohoka na ireo manana pacemaker na famelomana fanafody hafa
Ny tongotra dia tokony ho mando na mando hahazoana vokatra tsara indrindra
Ny 1byone Bluetooth Body Fat Scale dia misy fampiharana mifanaraka amin'ny Android sy iOS. Ny refy nomerika dia mampiseho ny lanjanao miaraka amin'ny isan-jaton'ny rano, tavy amin'ny vatana, BMI, masin'ny hozatra, mason'ny taolana ary tavy visceral. Tsy toy ny mizana hafa, izay mitaky paompy na tsindry bokotra raha tokony hodianao, ny tokony hataonao dia ny manakatra ny refy hamakiana eo no ho eo. Ho toy ny bonus fanampiny, dia manaiky ho azy ny mpampiasa 10 isan-karazany.
Mitadiava fampahalalana momba ny fatin'ny Bluetooth Body 1byone eto sy eto.
VideoLahatsary mifandraika amin'ny ambaratonga tavy blueberry 1byone2018-10-22T15: 12: 05-04: 00
Viagra Generic: torolàlana ho an'ny Viagra mora vidy amin'ny Internet
Fitantanana fanafody ho an'ireo mararin'ny homamiadana sy mpikarakara
ny fomba fanaovana hangover handeha haingana kokoa
izay gripa mahery a na b
azonao atao ve ny miaritra aretina misy masirasira?
ohatrinona ny vidin'ny tavoahangin'ny insuline
mandritra ny latabatra fisalasalana ho an'ny fitondrana vohoka
mila dokotera ho an'ny tadin'ny glucose ianao